Juventus Oo Tixgalineysa Inay U Adeegsato Aaron Ramsey Saxiixa Xiddiga Manchester United Paul Pogba
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo Tixgalineysa inay u adeegsato Aaron Ramsey saxiixa xiddiga Manchester United Paul Pogba
October 11, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay u adeegsato Aaron Ramsey heshiis qeyb ah oo ay kula soo saxiixaneyso xiddiga qadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba .
Iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka France uu ka harsan yahay wax ka yar hal sano qandaraaska uu ku joogo Old Trafford, waxaa la filayaa inuu waqtigiisa qaato ka hor inta uusan go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa.
United ayaa la ogyahay inay dooneyso inay sii haysato adeegyada xiddigii ku guuleystay Koobka Adduunka, waxaana ay diyaar u yihiin inay siiyaan kubbad sameeyaha mushahar kordhin weyn.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Daily Mail , Juventus ayaa laga yaabaa inay raadiso inay United ku tijaabiso heshiis Ramsey u dhaqaaqi doono dhanka kale.
Xiddiga reer Wales waxaa ku dhacay dhaawacyo soo noqnoqday intii uu joogay Turin, 30 jirkaan ayaa lagu soo koobay kaliya 105 daqiiqo oo kubbadda cagta ah Serie A iyo Champions League xilli ciyaareedkan.
Heshiis kasta oo is dhaafsi ah ayaa u baahnaan doona inuu dhaco inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo iyadoo United laga yaabo inay cadaadis saarto inay aqbasho lacag yar oo Pogba ah.